I-Semalt icebisa iindlela zokuBaqhafaza ii-Intanethi kunye neScams
Abanikazi abaninzi beendawo kunye nabaphuhlisi baye bafumana iinzame zokukhwabanisa kunye nezikhwama ze-intanethi.Okumangalisa kukuba, ininzi yamaxhoba ayichazi nto. Ngokuqhelekileyo, ixhoba lihlazo lokuba liye lahlaselwa okanye lilahlekelwe yilo themba.Kulo mba, kubaluleke kakhulu ukunika ingxelo ngekhredithi ye-intanethi kunye nobuqhetseba ukukhusela izigwenxa ze-intanethi ekuhlaseleni ezinye iisayithi okanye abantu. Nyekufuneka ube nomoya wokulwa. Ukongezelela, kukho imibutho emininzi ekulungele ukunceda amaxhoba - esenler arçelik servis numarası. Ulwaphulo-mthetho olwenziwa ngeendlelai-intanethi ikwahlwayelwa kwakhona.
Ngaloo ndlela, umsebenzisi we-intanethi, umnini-mhlaba okanye umninimzi unokubika ingxelo yobuqhetseba okanye izikratshi?Ziziphi ezinye zeenkcukacha zobuqhetseba / iingxelo zobuqhetseba? Fumana kule ncwadi-ebhalwe ngu-Andrew Dyhan, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt .
I-scam e-intanethi / ingxelo yokukhwabanisa.
I-Centre ye-Intlaphulo yeziKhalazo ze-Intanethi (ICCC) iyisisombululo sokuqala esisebenzisekayo. Yi leubambiswano phakathi kweNational White Collar Center Centre kunye ne-United States Federal Bureau yoPhando. Ngokwe-intanethiiingcali, i-ICCC iphakathi kweendawo eziphambili zokubhengeza ubuqhetseba obuninzi obubandakanya ukukhwabanisa (okanye ukufakwa kwekhompyuter), ukweba kwezorhweboIimfihlelo (UQeqesho lwezoQoqosho), ukweba ubunikazi kunye nezinye izixhobo zokuhlaselwa kweCyber. Nangona kunjalo, umntu unako ukubika nayiphi na ulwaphulo-mthetho olungenaloukuwa kwiindidi ezikhankanyweyo nangona baziva ukuba ulwaphulo-mthetho olubi luyinto encinci..Ngaphezu koko, ukuba ulwaphulo-mthetho aluwa phantsi kweeklasi zeCCCC,intlangano inokuqondisa ixhoba kwiziko elifanelekileyo. Ngaloo ndlela, i-ICCC yiplati evulela iingcango kuzo zonke ixhoba ze-online scams kunye nobuqhetseba.
Okwesibini, i-Business Business Bureau yase-US neKhanada inika iwebhusayithikubaxhasi abancedisa amaxhoba ekuhlaselwa kwezikhalazo malunga nabathengisi abaxhomekeke kwi-Intanethi kunye nabanye abaphangi. Ukongezelela, amaxhoba enkohlisoUnokuphinda uphendule le nkcukacha yedatha ukuqinisekisa ukuba umrhwebi othile unakho naziphi izikhalazo ezifakwe kuzo. Kwakhona,Izikhalazo zikhuthazwa ukuba zenze ulandelelwano kwaye zichonge ukuba ngaba ziphi na izikhalazo ezibhekiselele kumthengisi we-intanethi ziye zazisombulula.
Okwesithathu, indawo ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi ye-United States enyeindlela yokufaka inkohlakalo ye-intanethi. Iqonga lilungele izikhalazo ezifana nokuhlaselwa ngamaphutha, i-scam imeyili, izikhalazo zabathengiinkxalabo yokuthengisa i-intanethi kunye nentengiso ye-intanethi. Isayithi inika kwakhona iziqhagamshelwano kwie-arhente ezifanelekileyo ezijongene nokunika ingxelo nge-scamuhlobo oluthile lolwaphulo-mthetho.
Ngokulandelayo, i-Craigslist inekhasi elinikezelwe ukukhwabanisa ukongezaukubonelela ngolwazi malunga neenkqubo zokunika ingxelo xa umntu ephangwa ngamalungu e-Craigslist. Olunye ulwazi lufumaneka kwiIwebhusayithi ye Craigslist malunga nendlela yokujongana neenkcenkceshe naliphi na ixesha xa zivela.
Isiko loKhuseleko sase-eBay sisinye isicwangciso soKhuseleko lweMpahla yokuThengisa. itkuncedisa ukukhankanya amaxhoba kunye neengxelo zentengiso ezidibeneyo kunye nokukhwabanisa kumagunya afanelekileyo. Ngaphezulu, i-eBay Security Centre inikezaukuthotyelwa komthetho malunga neendlela zokumisela ukuba umenzi wokuhlamba uzama ukuthengiswa kweentengiso ezitheweyo. Lo mbandela ubaluleke kakhulukumaxhoba okuba ipropati.
Ekugqibeleni, iphepha le-Facebook Security livumela ixhoba elibi ukuba libize ubuqhetseba, libukhaliizicelo, i-akhawunti, i-spam okanye nayiphi na into ehlasela i-Facebook. Musa ukuhlazeka. Bika ubuqhetseba ukukhusela iingozi ezizayo.